Tena Label SouthAgro 2021
Label: SouthAgro 2021
Fanambarana ny programa fandraharahana amin'ny fampirantiana "YUGAGRO 2021"
Ny 23 ka hatramin'ny 26 Novambra, Krasnodar dia hampiantrano ny fampirantiana iraisam-pirenena faha-28 momba ny milina fambolena, fitaovana ary akora ho an'ny famokarana sy fanodinana ...
"YUGAGRO 2021": momba ny tombontsoa amin'ny fitsidihana ny fampirantiana
Ny fampirantiana lehibe indrindra any Rosia momba ny milina fambolena, fitaovana ary fitaovana ho an'ny famokarana sy fanodinana ny vokatra fambolena "YUGAGRO ...
Iray volana sisa tavela talohan'ny fisokafan'ny "YUGAGRO 2021"
Tao anatin'ny iray volana, fampirantiana ny milina fambolena, fitaovana ary fitaovana lehibe indrindra amin'ny famokarana sy fanodinana ireo vokatra fambolena vokatra "YUGAGRO ...
50 andro alohan'ny fisokafan'ny YUGAGRO 2021
Tao anatin'ny 2 volana latsaka dia hisy ny fampirantiana faha-28 "YUGAGRO" Misy 50 andro sisa tavela mandra-pisokafan'ny fampirantiana fambolena lehibe indrindra ...
Pavel Kosov: sehatra tsara ifanakalozan-kevitra mivantana amin'ireo mpanjifa i YUGAGRO "
Resadresaka nifanaovana tamin'ny Tale Jeneralin'ny JSC "Rosagroleasing" P.N. Kosov tamin'ny alin'ny fampirantiana iraisam-pirenena momba ny fambolena "YUGAGRO 2021" Tale jeneralin'ny JSC "Rosagroleasing" Pavel ...
Inona no miandry ny mpitsidika ny fampiratiana YUGAGRO 2021?
Ny fampirantiana iraisam-pirenena ny milina, ny fitaovana ary ny fitaovana 28 ho an'ny famokarana sy ny fanodinana ireo vokatra fambolena "YUGAGRO" dia hatao tsy ho ela. Ny mampiavaka azy ...
Zava-misy 10 momba ny fampirantiana "YUGAGRO"
Manomboka amin'ny 23 ka hatramin'ny 26 Novambra 2021 dia handray ny fampirantiana faha-28 "YUGAGRO" i Krasnodar. Hamarino raha fantatrao daholo ny momba ...
Ny fepetra takiana lehibe indrindra amin'ny voa dia ny tsy maintsy kalitao avo lenta!
Lehiben'ny departemantan'ny fampiroboroboana sy fandraharahana ao amin'ny KVS RUS (Vondron'orinasa voanjo sy solika) Yekaterina Larchenko ary mpitantana ny fampandrosoana ny orinasa ...
Ny ovy mahery 400 taonina no kasaina hovidiana amin'ny taona 2017 any Dagestan
Ny vokatra ovy sy legioma any amin'ny faritra Yaroslavl dia ambany noho ny tamin'ny taon-dasa